I-Apple ne-Google babambisana ne-coronavirus ngohlelo lokusebenza oluhlangene | Ngivela kwa-mac
I-Apple iyaqhubeka nokujoyina amaphrojekthi inhloso yawo ukulwa ne-coronavirus. Indlela lezi zinhlobo zezinkampani ezinayo ukusiza ukuvimbela ukusabalala kwazo noma ukutheleleka. Ngakho-ke I-Apple izojoyina iGoogle ngenhloso yokwakha uhlelo lokusebenza lwe-multiplatform olukwazi ukwazisa umsebenzisi uma eseduze kolunye onezimpawu.
Imidondoshiya emibili ifuna ukujoyina wonke amabutho ayo ukuze gwema ukutheleleka phakathi kwabantu kepha uhlonipha ubumfihlo.
I-Apple izovula i-bluetooth kuGoogle kunoma yiziphi izinhlelo zokusebenza zezempilo zomphakathi ukulwa nezifo
Umqondo wokuthi izingcweti ezimbili zobuchwepheshe bomhlaba zifuna ukukwenza dala uhlelo lokusebenza ukuthi iyakwazi ukwazisa umsebenzisi wayo ukuthi useduze nomunye umuntu oxwayise kusengaphambili ukuthi unezimpawu zesifo esidalwe yi-coronavirus.
Indlela yokukwenza kuzoba nge-bluetooth of mobiles futhi ngenhloso enkulu yokusebenzisa nokusebenzisa uhulumeni nezinhlaka zezempilo ukunciphisa ukusabalala kwegciwane.
Ngokunengqondo, abasebenzisi kufanele balande uhlelo bese banikeze izimvume ezidingekayo ukuze lusebenze kahle. Kepha kuzoba okokuqala ukuthi i-Apple ivumele idivayisi ye-Android ne-Apple ukuxhumana nge-bluetooth. Kepha kunjalo, kuphela uma benohlelo lokusebenza lwezempilo olufanayo.
Kulindeleke ukuthi yiba may lapho zombili izinkampani ziqala i-API ezovumela lokhu kuhambelana phakathi kwama-smartphones futhi ingalandwa esitolo sohlelo lokusebenza lenkampani ngayinye.
Lolu hlelo lokusebenza izosizakala ngeWebhu lapho ungabona ukuqapha izifo kanye nabo bonke abafuna ukubamba iqhaza, ngale ndlela kuhloselwe ukufinyelela inani elikhulu labantu okungenzeka.
Uma ukhathazeka Ubumfihlo ukuthi lolu hlelo lokusebenza lunikeza, kufanele wazi ukuthi zombili izinkampani shicilela ngokusobala imininingwane ngomsebenzi wabo ukuze abanye babuyekeze.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple ne-Google babambisana ne-coronavirus ngohlelo lokusebenza oluhlangene
UPedro V. Ramón Alcover kusho
Ngifisa sengathi oHulumeni bomhlaba wonke bangafunda unomphela ukuthi le yindlela yokuxazulula izinkinga zabantu, zabo BONKE abantu.
Inhlonipho nokubambisana kanye nokunye, kungakhathalekile ubulili, umbala, ubuhlanga noma umcabango wezepolitiki, kubalulekile ekusebenzeni kahle KWABANTU ngokuphelele ...
Phendula uPedro V. Ramón Alcover
Izinqamuleli zekhibhodi zeMephu ku-Mac